Fahasalamana - Sakafo Nutri | Nutri Diet (Pejy 3)
Raha apetraka ao anaty kaopy misy rano mangotraka ny rantsana thyme dia tokony havela hiala sasatra mandritra ny 10 minitra, avy eo ...
Raha te hisorohana ny osteoporose ianao (ny fahanginan'ny valanaretina), ity filozofia momba ny fiainana miorina amin'ny fitsipika tsotra telo ity dia hanampy anao hahatratra azy.
Fika 4 hatoriana tsara kokoa amin'ny aretin'ny vanin-taolana
Raha mijaly amin'ny vanin-taolana rheumatoid ianao, ny fanandramana ireo tetika tsotra 4 ireo dia hanampy anao hatory tsara.
Ahoana ny fomba hanesorana ny atiny, ny sarakaty, ny havokavoka ary ny ra?
Ny aty dia taova iray manana fahaizana manova poizina ho lasa singa tsy mampidi-doza alohan'ny famoahana azy ireo. Fa…
Ny metabolic sy ny sela dia ny fihenan'ny lanja, ny hatavezina ary ny tavy
Misy antony maromaro eo am-piandohan'ny hatavezina. Anisan'ny zava-dehibe indrindra, tsy isalasalana fa mahita ireo antony ...
Endometriozy sy sakafo ara-pahasalamana
Miara-miasa ny endometriozy sy ny sakafo mahasalama. Matetika ny aretina dia dimy taona aorian'ny fiandohan'ny aretina.
Inona no raisina amin'ny cellulite
Ny iray amin'ireo fahavalo dia cellulite, fanangonana tavy izay apetraka matetika amin'ny valahana sy ny tongotra, ary ajanona miaraka amin'ireto sakafo ireto
Sakafo azonao hanina nefa tsy manenina
Ireto misy sakafo azonao hanina nefa tsy mahatsiaro tena ho meloka, tena ambany kaloria izy ireo ary hanome anao ny tanjaka ilainao hampihena ny lanja
Ahoana ny fampidirana legume ao amin'ny sakafonao
Tokony hihinana legioma intelo isan-kerinandro ianao hanatrarana izany, mamela anao toro-hevitra vitsivitsy izahay mba tsy ho leo amin'ny tsirony
Miova ny vokany eo amin'ny vatan'ny fotoana
Rehefa tara amin'ny fararano ianao amin'ny fararano dia mahazo torimaso iray ianao, ary mifanohitra amin'izay dia very iray ...
Fitsaboana hatsaran-tarehy soda mahandro telo mahavariana
Soda dia afaka manampy anao hamerina amin'ny laoniny ny hoditrao sy ny hoho aorian'ny ririnina lava. Eto izahay dia manazava ny fomba ahazoana azy.
Famantarana fa mila manafoana ny vatanao ianao
Tokony hitandrina ny famantarana sy ny famantarana izay andefasan'ny vatantsika hanala sy hanadio azy isika hanala ny poizina
Mila mampiakatra ny toetranao ve ianao? Eto izahay dia manazava hoe inona ireo fahazarana misakafo izay tsy maintsy raisinao mba hahatratrarana izany ary hiverina amin'ny lalana marina.
Manaparitaka menaka esansiela mba hampitony ny tebiteby sy hampitraka ny fanahinao
Ireo diffusers menaka esansiela dia hanampy amin'ny fitoniana ny tebiteby ary hampiakatra ny fanahinao na ao an-trano na any am-piasana. Jereo eto ny momba azy ireo.
Miparitaka ny kakao hazelnut
Eny, afaka mahazo fomba mahandro sy mamy ary mahasalama ianao, ity kôkôla kakaô ity dia hanaitra anao noho ny tsirony sy ho tombontsoany lehibe.
Fampiharana Botox dimy izay afaka manatsara ny fiainan'ny olona an-tapitrisany
Ny botox dia fantatra amin'ny fikolokoloana ketrona, saingy fantatrao ve fa ity fanafody ity dia mitsabo ny fahaketrahana sy ny migraine ankoatry ny olana hafa?
Torohevitra hialana amin'ny fijaliana amin'ny conjunctivitis
Na dia maro aza ny olona no tsy manome lanja loatra ny vokatra maso, ny fampiasana manokana ireo karazana vokatra ireo dia tena ilaina mba hisorohana ny fihanaky ny conjunctivitis sy ny areti-maso.
Eucalyptus hiadiana amin'ny hatsiaka
Ny kininina dia hazo naterak'i Aostralia, saingy hita any amin'ny kaontinanta hafa. Ny raviny dia voalaza fa fananana manasitrana noho ny aretin'ny taovam-pisefoana, toy ny sery sy gripa.
Torohevitra hanasitranana ny psoriasis amin'ny tongotra
Voalohany, mora ny mahafantatra fa ny psoriasis dia aretina mitaiza, noho izany ny fitsaboana dia mikendry ny hampihena ny soritr'aretin'ny aretin-koditra ary koa hampihena ny tsy fahazoana aina ateraky ny marary.
Fomba voajanahary telo hisorohana ny osteoporose sy ny taolana tapaka
Manazava ny fomba hanatsarana ny taolam-paty voajanahary isika izao satria fantatsika fa ny kalsioma fanampiny dia mety tsy ilaina amin'ny ady amin'ny osteoporosis.
Miaraka amin'ny sakafo misaraka dia hianaranao ny hampihena ny lanjany amin'ny fomba mahomby. Ny hafetsena dia ny MANOKANA ny sakafo fa tsy ...
Torohevitra hisorohana ny holatra amin'ny tongotra
Areti-mifindra tokoa ny holatra, azon'izy ireo aparitaka amin'ny tontolo iainana, indrindra rehefa ilaina ny hafanana sy ny hamandoana, ary aorian'ny fifandraisana amin'ny olona iray hafa na eo anelanelan'ny faritra roa amin'ny vatana, raha misy iray amin'izy ireo no voa.
Ahoana ny fiasan'ny aurikoterapy hampihena ny lanjany?
Ny Auriculotherapy dia mifototra amin'ny fitsipika mitovy amin'ny akupunktur, na dia tsy avy amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa aza izy io dia novolavolaina tamin'ny taona 50. Izy io dia momba ny fanentanana ireo teboka marina hita eo amin'ny sofina mba hampiroborobo ny fihenan'ny lanja.
Ahoana ny fomba hijanonana amin'ny endrika mandritra ny Krismasy amin'ny fotoana sy ezaka kely
Manolotra anao hevitra izahay mba hitazomana tsara mandritra ny Krismasy nefa tsy mandany fotoana na ezaka be amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena.
Ny fanindrohana ny sofina dia afaka manasitrana migraines
Vaovao tsara ho an'ny olona mijaly amin'ny migraines miverimberina io ary tsy mahalala hoe masina iza no hatokisany rehefa avy nanandrana ny fanafody azo atao sy azo eritreretina.
Ahoana no isehoan'ny kohaka mitaiza?
Ny kohaka maharitra ary matetika ny kohaka maina sy mahasosotra dia matetika amin'ny ririnina noho ny fahalavoana. Raha ny kohaka maharitra dia miaraka amin'ny feo tsy mahafinaritra, ny fihenan'ny tratra, fahatsapana sempotra, miresaka momba ny asma bronchiale isika fa tsy hyperresponsiveness be loatra.
Mahazoa fahasambarana lehibe kokoa, ny vahaolana farany amin'ny taona vaovao tsara indrindra
Ny fanapahan-kevitra tsara indrindra amin'ny Taom-baovao izay azonao apetraka dia ny hahasambatra kokoa. Eto izahay dia manome torohevitra anao hahatratrarana azy.
Ahoana no handaniana gotu kola hampihena ny lanja?
Ny fihinanana gotu kola hampihena ny lanjany dia azo atao amin'ny fomba roa samy hafa. Ny fampidirana gotu kola na kapsily sy takelaka. Raha ny safidy voalohany no voafidy dia tokony mividy gotu kola maina ianao amin'ny fivarotana manokana izay mivarotra vokatra voajanahary, amin'ny fivarotana sakafo ara-pahasalamana na any amin'ny fivarotam-panafody.
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny tsimokaretina vavony sy ny fanapoizinana ara-sakafo?
Azavainay izay tsy mampitovy ny viriosy vavony sy ny fanapoizinana ara-tsakafo hanampiana anao hisoroka azy ireo amin'izao vanim-potoanan'ny vanim-potoana izao.
Fa maninona no mena ny tavako rehefa manao fanatanjahan-tena aho?
Azavainay ny antony mahatonga ny lokon'ny tarehy mifandraika amin'ny ezaka lehibe ary raha misy ny antony tokony hahatairana.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fihenan'ny volo?
Voalohany, zava-dehibe ny manatona mpitsabo dermatolojista na dokotera manam-pahaizana manokana raha mahatsikaritra ny fihenan'ny volo tampoka na haingana.
Sakafo hiadiana amin'ny cellulite
Ireo no sakafo tsara indrindra hampihenana ny cellulite amin'ny vatana
Torohevitra vitsivitsy hisorohana ny famoizam-po amin'ny ririnina
Ny tsy fisian'ny hazavana, hatsiaka, havizanana ary moraly ambany dia soritr'aretin'ny antsointsika hoe fahaketrahana amam-potoana, aretina iray izay misy fiatraikany amin'ny 3 ka hatramin'ny 5% amin'ireo mponina amin'ny hemisphere avaratra manomboka amin'ny fararano. Andao hijery torohevitra sy vahaolana vitsivitsy hisorohana izany.
Nahoana no zava-dehibe ny manatona mpitsabo nify ny be antitra?
Ny fandehanana any amin'ny mpitsabo nify dia zava-dehibe amin'ny taona rehetra, fa mandritra ny fahanterana dia toa fahazarana tena lehibe izany. Eto no hanazavana ny antony.
Ahoana ny fomba hisorohana ny dementia sy ny Alzheimer isan'andro
Manolotra anao ireo fahazarana asehon'ny fikarohana fa afaka mampihena ny risika mety hanananao diementia sy Alzheimer.
Torohevitra hanadiovana ny vavony miorina amin'ny fanafody voajanahary
Ny infusions dia mety hampihena ny tsy fahazoana aina ateraky ny vavony. Aleo izy ireo dia entina amin'ny vavony foana, ary ny tena ilaina indrindra dia ny mint, chamomile, fennel ary dite maitso.
Artritis Rheumatoid - Ahoana no fomba ahazoanao fiainana tsara kokoa
Manolotra toro-hevitra ho anao izahay hianaranao ny fomba hitantanana aretin'ny vanin-taolana amin'ny rheumatoid ary amin'izany dia azo antoka fa tsy manakana anao tsy hanana fiainana tsara ity aretina ity.
Ahoana ny fomba hampihenana ny tahan'ny estrogen?
Ny estrogens dia hormonina ahafahan'ny vehivavy bevohoka. Ny hormonina dia vita amin'ny ovaire ary mifehy ny fiterahana. Raha tsy misy estrogen, tsy azo atao ny miteraka.
Ny hery manasitrana ny finamanana amin'ny taona 60
Ny be taona dia afaka mandray soa betsaka amin'ny fananana finamanana tsara. Raha ny fanadihadiana natao tato ho ato dia manitatra ny androm-piainan'izy ireo izany.
Ny tabataba any an-dàlana dia mampitombo ny ahiahy amin'ny fahaketrahana
Ny fanadihadiana iray dia nanatsoaka hevitra fa ny olona miaina amin'ny tabataban'ny lalana mafy sy maharitra dia atahorana kokoa hiteraka fahaketrahana.
Mampianatra anao ny fiovan'ny yoga roa izahay hiala sasatra mora foana ao an-trano ary avelao ny adin-tsaina isan'andro isan'andro.
Ny fampiasana labiera samihafa hikarakarana ny volo sy ny hoditra
Ny labiera dia iray amin'ireo zava-pisotro misy alikaola be mpampiasa eran-tany. Betsaka no aleony mangatsiatsiaka mandritra ny andro mafana be, izay isehoan'ny faniriana hisotro zavatra mamelombelona.
Ianao ve mitady ny fomba hanaovana ny diet artichoke tsikelikely? Fantaro ny fomba hanary lanja hatramin'ny 4 kilao ao anatin'ny 3 andro ary tsy atahorana ny fahasalamanao.
Araka ny fanadihadiana iray vaovao, ny fitsaboana mazava fotsy mamirapiratra dia manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretin'ny fahaketrahana tsy amin'ny vanim-potoana.
Ny voankazo mety hiadiana amin'ny mony
Mba hialana amin'ny mony amin'ny alàlan'ny sakafo dia zava-dehibe ny fahalalana fa tsara ny fibre hanatrarana izany tanjona izany. Manampy amin'ny fanadiovana ny vatana avy ao anatiny tokoa izy ireo ary manala ireo poizina voatahiry ao anaty vatana.
Ny tombony azo amin'ny fanadiovana ny kôlôna
Iray amin'ireo torohevitra tsara indrindra azo omena mba hanafoanana ny autointoxication ny colon dia ny fifadian-kanina.
Torohevitra mihazakazaka nefa tsy reraka
Ny miaina tsara dia ilaina amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena sy mihazakazaka nefa tsy reraka. Ny fitsipika voalohany dia ny miaina amin'ny alàlan'ny oronao ary mivoaka amin'ny vavanao, na dia mandritra ny fiasa mahery aza dia toa sarotra izany rehefa tsy mandray rivotra amin'ny vavanao.
Inona no mahatonga ny hemoroida sy ny fomba fisorohana azy ireo?
Azavainay ny antony mahatonga ny hemôrôida sy ny zavatra azo atao isan'andro hisorohana an'io fizotra maharary izay mipoitra ao amin'ny faritra ambany io.
Mijanona ho mavitrika, laharam-pahamehana mandritra ny taona maro
Ny mijanona ho mavitrika amin'ny fahanterana dia laharam-pahamehana raha te hanana fiainana milamina kokoa ianao, satria mahasoa ny hetsika isan'andro.
Ny dipoavatra mavokely dia tsy an'ny fianakavian'ny dipoavatra, na dia izany aza, tena sarobidy amin'ny fanafody voajanahary izy io, mahafantatra ny fananany
Azavainay ny fiantraikan'ny andro fohy amin'ny olona be saro-pady sy ny zavatra tokony hatao mba tsy hianjera amin'ny tebiteby sy ny fahaketrahana.
Yoga manao fanazaran-tena mba hanana kibo fisaka
Raha te hihena ianao dia azonao atao ny manandrana yoga, mifantina ny sasany amin'ireo fampihetseham-batana tsara indrindra handokoana ny vatana sy handoroana tavy mihangona.
Menaka tongolo lay hampijanona ny fihenan'ny volo
Ny menaka tongolo gasy dia singa voajanahary izay manandanja kokoa ao amin'ny katalaogin'ny fanafody voajanahary mahomby indrindra amin'ny fahaverezan'ny volo.
Fitsaboana voajanahary samihafa hiadiana amin'ny lava-kazo
Zavamiaina bitika an-jatony no voatahiry ao am-bava, ao anatin'izany ny bakteria Streptococcus mutans, izay hita eo anelanelan'ny nify sy amin'ny fanamaivanana ny satroboninahitry ny molars sy premolars, ka miteraka lava.
Mandehana mihazakazaka anio
Fanatanjahan-tena mora vidy sy mahasoa izay hahatonga anao ho salama ara-batana sy ara-tsaina, mandosoa hazakazaka
Voan'ny voatavo manampy azy ireo amin'ny sakafonao
Aza manary voa voatavo, manendasa azy ary mahazo tombony amin'ny fananany rehetra
Azavainay izay sakafo manampy anao hatory bebe kokoa sy tsara kokoa raha mihinana azy ireo mandritra ny sakafo hariva na alohan'ny hatory.
Very ny hakitroky ny taolana mandritra ny fadim-bolana
Ny vehivavy rehetra mahatratra ny fadim-bolana dia manomboka miova amin'ny vatany noho ny fiovan'ny hormonina aterak'ity dingana ity.
Torohevitra hanadiovana ny hoditra
Ny hoditra no taova lehibe indrindra ao amin'ny vatana, noho izany dia ara-dalàna raha manangona poizina sy sela maty misy fiatraikany amin'ny endriny.
Fiofanana sy famahanana
Ny fampiofanana amin'ny fifadian-kanina dia mizatra ary mitarika ny vatana hahomby kokoa mandritra ny fanetsehana ny tavy.
Ampidino ny haavon'ny triglyceride anao
Miezaha hampihena ny haavon'ny triglycerides anao mba tsy hampiharihary aretim-po mahery vaika amin'ny aretim-po
Inona avy ireo loza ateraky ny hatavezina amin'ny fahasalaman'ny olona?
Azavainay izay aretina mety hateraky ny hatavezina, izay rehefa manana lanja 20% farafahakeliny ilay olona noho ny nanolorany ny halavany.
Ireo hena voahodina dia mifandraika amin'ny fitomboan'ny risika homamiadana amin'ny tsinay
Misy porofo matanjaka mampifandray ny fihinanana hena voahodina isan'andro miaraka amin'ny risika homamiadan'ny tsinay. Eto izahay dia manazava misimisy kokoa momba an'ity lohahevitra ity.
Ny tsaramaso voatabia dia manana toetra anticoagulant izay manatsara ny fandehanan'ny rà.
Ny fandehanana an-tongotra dia afaka mandoro kaloria sy mampihena ny lanjany. Na izany aza, fantatrao ve ny halavirana tokony haleha mba hanombohana hihena? Kaloria firy no may?
Ahoana no fanasitranana fery voa am-bavony?
Ny fitsaharana miaraka amin'ny sakafo mahasalama sy voalanjalanja no fomba tsara indrindra hitsaboana fery amin'ny vavony.
Soa azo avy amin'ny vady yerba
Ianaro ny tombo-tsoa rehetra atolotry ny vady anao, manomboka amin'ny fifohazana maraina ka hatramin'ny fandatsahana kilao fanampiny
Raiso ny kiwi amin'ny fitohanana
Mihinàna kiwi matetika kokoa mba hihazonana fiainana salama, tsy misy fitohanana. Avelao izy hihetsika ary handany azy amin'ny fomba rehetra.
Ahoana no hamantarana ny antony mahatonga ny vozonao?
Azavainay izay aretina miteraka tenda ary inona ny soritr'aretina hafa manampy anao amin'ny ady amin'ity fahatsapana manelingelina ity.
Ny zavamaniry miala sasatra
Mba hanampiana anao haka aina, ireo no toetra sy fananana tadiavinay indrindra amin'ny zavamaniry.
Yoga mba hijanonana mandritra ny androm-piainana
Azavainay ny antony mahatonga ny yoga ho iray amin'ireo fampihetseham-batana tsara indrindra azo atao mba hisorohana ny fihenan-dàlana sy ny fihetsika tsy dia tsara.
Ahoana ny fampiasana Viagra?
Raha manana olana amin'ny fananganana ianao dia tokony manatona ny dokotera hamantatra ny tsy fetezan'ny erectile na ny tsy fahampian-tsakafo ary mamaritra ny Viagra.
Fahazarana mampihena ny tratran'ny homamiadan'ny nono
Manolotra toro-hevitra maromaro izahay, miorina amin'ny fomba fiainana, izay afaka manampy amin'ny fisorohana ny homamiadan'ny nono na, farafaharatsiny, mamantatra azy io aloha.
Ny fihinanana vitamina D avo lenta, singa iray atahorana ho voan'ny osteoporose
Ny fandinihana dia manondro ny fifandraisana misy eo amin'ny fihinanana vitamina D avo sy ny risika miteraka osteoporosis. Eto izahay dia manazava ny fomba hisorohana an'io olana io.
Fitsaharana, ilaina amin'ny ati-doha mba hahasalama azy
Ny fitsaharana araka ny tokony ho izy dia iray amin'ireo tsiambaratelo mba hijanonan'ny ati-doha ho tanora foana na eo aza ny taona maro lasa. Eto izahay dia manazava ny fomba hahatratrarana azy.
Sakafo ho an'ny aretin'i Crohn
Rehefa mijaly amin'ity aretina ity ianao, ilay antsoina hoe Crohn's disease, dia tokony hisoroka ny dite na kafe ianao satria manelingelina ny tsinay.
Mijanona ho salama aorian'ny famindrana fo
Manolotra torohevitra dimy izahay mba hijanonana ho salama ao anatin'ny 5-10 taona aorian'ny famindrana fo.
Menaka miorina amin'ny kanelina mba hihena ary hanana kibo fisaka
Ny menaka kanelina dia efa nampiasaina hatry ny ela fitsaboana hafa hisorohana sy hisorohana aretina isan-karazany, hanatsarana ny fahasalamana.
Fitsaboana voajanahary hiadiana amin'ny fanaintainan'ny taolana
Ny fanaintainan'ny taolana dia miseho aorian'ny ratra, na ny fihoaram-pefy, noho ny aretina sasany toy ny osteoporosis, osteoarthritis na arthritis, na aretina lehibe aza.
Ny fananan'ny mallow
Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ny mallow dia ny fanalefahana ny toe-pahasalamana toy ny fahasosorana, vay, eczema, ratra, sns.
Blueberry Alaska, iray amin'ireo sakafo manohitra fahanterana indrindra
Azavainay ny atao hoe blueberry any Alaska, inona ny tombony azo avy amin'ny fahasalamany ary nahoana izy io no tsara kokoa noho ny voaroy rehetra.
Ahoana no fanasitranana ny fivontosana?
Ny dokotera manam-pahaizana manokana dia tokony hanontaniana momba ny diagnostika marina, indrindra fa ny anton'ireo soritr'aretina mifandraika amin'ny fivontosana, fanaintainan'ny kibo, mandoa, tazo, ary fivalanana mahery vaika.
Inona no atao hoe fitaintainanana sy ny fomba hiadiana amin'izany
Azavainay ny atao hoe ny tebiteby amin'ny fararano, ary koa ireo torohevitra mahomby indrindra mba tsy hahalasa anao ity aretina ity ary hivadika ho fahaketrahana.
Esory ny ranon-javatra amin'ny voatabia sy persily
Manampia ranom-boasary sy persily amin'ny sakafonao isan'andro mba hanafoanana ny tsiranoka be loatra amin'ny vatanao, amin'izay hisorohana ny fiakaran'ny tosidra
Zavamaniry manasitrana hemôrôida
Ny hemôrôida dia tsy manelingelina fotsiny fa mety hanjary olana ara-pahasalamana tena tsy mahafinaritra ihany koa. Mba hanamaivanana an'io karazana olana io dia afaka mividy zavamaniry sy akora voajanahary hafa omen'ny natiora antsika isika.
Torohevitra hamafana ny vatana amin'ny fomba voajanahary
Ny aty dia eo afovoan'ny fizotrany hanadiovana ny vatana. Ny fikarakarana ny aty dia misy fahatsapana ho tsara kokoa, maivana ary ambonin'izany rehetra mety kokoa
Ahoana ny fomba hanaovana sarontava kiwi?
Ny hany ilaina mba hanaovana an'io sarontava kiwi io ​​dia kiwi iray. Miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana ao an-dakozia toy ny fork na ny masher, afangaro ny kiwi mandra-pahazoana paty homogénous sy compact.
Handresy ny fahadisoam-panantenan'ny taon-dasa ve ny vaksinin'ny gripa vaovao?
Efa manakaiky ny fampielezana vaksiny gripa vaovao, saingy haharesy ny fahadisoam-panantenan'ny taon-dasa ve ity vaksiny ity? Matoky ireo manam-pahaizana.
Fitsaboana voasarimakirana be sandry hiadiana amin'ny homamiadana
Nandritra ny taona maro, ny fikarohana siantifika isan-karazany dia manaporofo ny mahasoa sy ny antibiotika ary ny antiviral an'ny voasarimakirana, afaka mampiato ny asan'ny zavamiaina bitika samihafa tompon'andraikitra amin'ny aretina sy aretina lehibe.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny tanimanga mena
Ny tanimanga mena dia fanafody mahomby hanentanana ny fivezivezy. Noho io vokany io, dia mamela famatsiana oksizenina manan-danja kokoa ho an'ny hozatra izy io.
Ny antony mahatonga ny tahan'ny hematokritra ambany
Alohan'ny hamaritana ireo antony ireo dia zava-dehibe ny fahalalana hoe inona ny tahan'ny hematocrit mahazatra anao.
Maninona ianao no tsy tokony hamerina ny fanazaran-tena ataonao amin'ny mpanazatra elliptical
Azavainay ny antony tsy tokony hamerenanao ny fanazaran-tena amin'ny bisikileta elliptical, ary koa ny torohevitra momba ny fomba hanaovana azy.
Dite tongolo gasy hanombohana tsara ny andro
Atombohy amin'ity tehina tongolo lay ity ny andro izay hanome anao otrikaina, vitamina ary mineraly marobe, hikarakara ny vatanao
Ahoana no ahazoana tsirinaina bebe kokoa?
Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia tsy sahy manatona an'io ny lehilahy manana tsirinaina somary ambany noho ny tahotra sao ho lany fotoana na ho adala.
Ahoana ny fomba fanaovana spaoro mahomby sy mahafinaritra
Izahay dia manazava ny fomba fanaovana spaoro eo am-pandriana fa tsy mankaleo.
Vary papaya hiadiana amin'ny katsentsitra
Ny tsaramaso papay dia manana endrika boribory, endrika manjelatra ary misy tsiro somary manitra. Izy ireo dia fanafody tsara hanalana ny katsentsitra. Soso-kevitra ny handany voamadinika papay 40 isan'andro.
Torohevitra hitsaboana aerophagia
Ny Aerophagia dia aretina ateraky ny toetra mampientanentana, toetran'ny fanahiana, maika ary indrindra ny fihinanana sakafo be loatra mandritra ny sakafo.
Torohevitra hitandrina ny voanao ho salama tsara
Ny voa dia taova hita any aorina ambany. Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny famokarana ny urine, ny fanafoanana ny fako misy poizina, ny fifehezana ny rano ao amin'ny vatana.
Fetsy hampihenana ny tosidra amin'ny alàlan'ny sakafo
Manolotra anao toro-hevitra sy tetika izahay hampihenana ny tosidra amin'ny alàlan'ny fihinanana, na amin'ny sakafo hohanina na amin'ny sakafo.
Torohevitra rehefa mandray valerian
Valerian dia zavamaniry iray fitsaboana izay hita amin'ny endrika samihafa amin'ny fivarotana sakafo ara-pahasalamana. Matetika izy io dia laniana ho fampidiran-dresaka, amin'ity tranga ity dia tsy maintsy omanina amin'ny rano mafana be izay tsy tonga mangotraka.
Ahoana ny fomba hahazoana ny vodiny voafaritra mora foana
Izahay dia manazava ny fomba hahazoana ny vodiny voafaritra amin'ny fomba mora, miaraka amin'ny fanazaran-tena azon'ny rehetra atao ao an-trano, ary koa amin'ny tetika sasany.
Ny tombotsoan'ny proteinina landy ho an'ny volo
Raha te hahalala ny tombotsoan'ny proteinina landy ho an'ny volo dia tsy maintsy hazavaintsika ny atao hoe proteinina landy.
Zava-pisotro tsara indrindra ho an'ny fihenan'ny lanja
mba hahavery ny lanja aloha dia tsy maintsy diovinay ny vatana ary noho izany dia avelanay ianareo izay zava-pisotro tsara indrindra hampihena ny lanja
Ny toetra kosmetika misy menaka argan
Ny menaka Argan dia tsy misy afa-tsy any Maraoka, ary ampahany amin'ny voan'ny hazo misy fiatraikany amin'ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy, ka io vokatra voajanahary io dia miha ampiasaina hatrany.
Atsaharo ny migraine amin'ny voasarimakirana sy sakamalao
Ampio hiady amin'ny migraines amin'ity fanafody voajanahary mifototra amin'ny voasarimakirana sy sakamalao ity, ho tsikaritrao fa nanjavona ireo soritr'aretina
Torohevitra fitsaboana ny hoditra maina
Ny vokatra voajanahary, tsy misy mpiasan'ny akora, toy ny menaka amandy, apetaka amin'ny landihazo malefaka, mampamando ny hoditra ary mitazona azy haharitra kokoa.
Mihazakazaka - Inona no hohanina amin'ny maraina sy tolakandro
Ilaina ny sakafo amin'ny fampiharana ny hazakazaka. Eto izahay dia milaza aminao hoe iza no sakafo tsara indrindra amin'ny fahombiazanao arakaraka ny fotoana.
Inona ny coenzyme Q10 ary inona no ilana azy?
Azavainay ny atao hoe coenzyme Q10 ary inona no ilaina ao anaty vatana, ary koa ny fomba hitazomana ny haavony ho ao anatin'ny fetra mahazatra.
Ny fitrandrahana an-trano miorina amin'ny dite maitso
Ny dite Green dia nanjary vokatra voajanahary, be mpampiasa amin'ny sehatry ny hatsarana, ary indrindra indrindra, mba hahatonga ny hoditra ho tsara tarehy sy ho salama kokoa.
Inona no hohanina rehefa maloiloy ianao
Ny crackers, karazana masiaka maina sy masira kely dia iray amin'ny sakafo fanjifana indrindra raha sendra maloiloy.
Torohevitra hisorohana sy hanasitranana ny fivalanana
Manolotra toro-hevitra maromaro izahay hanasitranana ny fivalanana, ary koa hisorohana izany raha sendra mitsidika firenena vahiny izahay.
Fanadiovana ny tarehy miorina amin'ny kôkômbra
Ny fanadiovana tarehy no dingana voalohany hitazomana ny hoditra salama, mampihena ny vokatry ny fotoana. Ho an'ity dia afaka manampy anao amin'ny sarontava voajanahary amin'ny kôkômbra ianao mba hanidiana ny mason-koditra sy hanamafisana ny hoditra.
Ahoana ny fomba hisorohana ny aretin-tratra
Manolotra torohevitra izahay hisorohana ny aretin'andoha ary hazavao ny antony mahatonga ity fahatsapana mirehitra manelingelina ity indraindray rehefa avy misakafo.
Torohevitra hanomanana ny hoditrao ho an'ny masoandro
Raha te-hanamboatra ny hoditrao amin'ny fiposahan'ny masoandro ianao dia tsy maintsy jerenao fa ny fihinanana sakafo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahazoana hoditra mahafinaritra amin'ny fahavaratra.
Ahoana ny fomba hisorohana ny hafanana amin'ny fitehirizana tsiranoka
Ny hafanana dia mampitombo ny olana amin'ny fitazonana ny tsiranoka. Eto izahay dia manazava ireo fahazarana vitsivitsy izay afaka manampy anao hitazona an'io olana io mandritra ny fahavaratra.
Fitsaboana voajanahary amin'ny hatsembohana be loatra amin'ny tongotra
Manolotra anao fanafody telo voajanahary izahay hiadiana amin'ny hatsembohana amin'ny tongotra be loatra sy ny fofona ratsy miaraka amin'ity aretina ity izay fantatra ihany koa amin'ny hoe hydrosis.
Famahanana sy electrostimulation
Manampy amin'ny sehatra maro ny fitaovana elektrostimulation. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny aorian'ny fanatanjahan-tena na ho famenonan'ny hetsika ara-batana mba hampandeha ny vatana.
Fitsaboana voajanahary amin'ny dandruff
Ny fanaovana soda dia manana fampiasana fitsaboana maro, azo ampiasaina hiadiana amin'ny dandruff.
Tany am-piandohana, ny kibo hypopressive dia nampiasaina indrindra ho fanazaran-tena aorian'ny fiterahana mba handrindrana ny gorodona pelvika sy hanamafisana ireo rafitra sy taova mety ho nalemy tamin'ity traikefa nahatsiravina ho an'ny vatana ity.
Ny fanazaran-tena tsara indrindra hamoahana ny kibo
Mifanaraka amin'ny hevitra fa ny zava-dehibe indrindra tokony hahavery ny kibo dia ny fanaovana fanazaran-tena izay miasa amin'ity faritra amin'ny vatana ity, izany hoe ireo voafantina, tokony hisafidy ireo izay voan'ny aretim-po ianao.
Ahoana ny fanesorana ireo komandy amin'ny voatabia?
Mba hialana amin'ny blackheads dia misy fanafody an-trano maro, ary ny iray amin'ireo mahomby indrindra dia ny fampiasana voatabia.
Manolotra ny fomba fahandro ho an'ny saron-tava fanadiovana an-trano izay mety tsara amin'ny fahavaratra, rehefa misy fanitarana ao amin'ny mason-koditry ny tarehy.
Jereo ny sakafon'ny Atkins izay hanampy anao hihena haingana sy mandaitra. Ny lisitry ny sakafo rehetra tsy azo atao ary avela hanaraka ny sakafo miaraka amin'ny antoka.
Jereo hoe ohatrinona ny halavan'ny andilanao hamaritana raha mety hampidi-doza ianao
Ny manodidina ny andilany dia milaza amintsika raha mampidi-doza ny fahasalaman'ny olona iray ny tavy. Fantaro bebe kokoa momba ny tavy amin'ny kibo eto.
Ny tombony kosehin'ny tanimanga
Ny tanimanga dia singa feno mineraly, izay mahatonga azy io ho mpiorina tsara ho an'ny tarehy.
Phytotherapy na ny fomba fanasitranana voajanahary
Azavainay hoe inona ny fanafody raokandro ary inona ny tombony lehibe amin'izany.
Antony fampiasana aloe vera hitsaboana diabeta
Aloe vera dia zavamaniry fitsaboana manana fananana maro ho an'ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy.
Elderberry hitsaboana kohaka maina
Ny Elderberry dia fanafody voajanahary tsara ho an'ny kohaka maina. Eto izahay dia hilaza aminao bebe kokoa momba ity hazo mifandraika amin'ny fanafody malaza hatramin'ny andro taloha ity.
Ahoana ny fampiasana ny ponytail?
Ho an'ireo izay tsy tia infusions na izay tsy tia ny tsiron'ny soavaly dia azo atao ny mandray azy ao anaty kapsily.
Saron-tava mony Oregano
Oregano dia ahitra izay, ankoatry ny astringent, dia manana fahaiza-manao antiseptika sy bakteria lehibe.
Ny tombony sy ny fanoherana ny guarana
Azavainay ny tombony sy ny fanoherana ny guarana ho an'ny fahasalaman'ny olona.
Sakafo manampy amin'ny fanasitranana
Mba hanasitranana ratra dia azo atao ny manaraka andiana famantarana ara-pitsaboana ka ny fiatraikany amin'ny hoditra dia kely araka izay azo atao.
Fitsaboana voajanahary hiadiana amin'ny mycose fivaviana
Ny mycoses fivaviana fantatra amin'ny anarana hoe candidiasis, dia manelingelina ary matetika. Izy ireo dia mety hiteraka fahasosorana sy mangidihidy eo amin'ny faritra maha-lahy na vavy ary ny antony dia mety ho maro amin'ny vehivavy amin'ny taona rehetra.
Dite efatra tsy misy kafeinina hikarakarana ny hoditrao
Manolotra karazana dite tsy misy kafeinina dimy izahay, zava-pisotro tsara indrindra ho an'ny hariva satria mampitony sy miasa amin'ny hoditra izy io mandritra ny fitsaharana.
Afaka mihinana paty ve ny olona tsy misy gallbladder?
Ny pasta dia mety miteraka olana amin'ny fandevonan-kanina ho an'ireo olona nitaky fandidiana gallbladder na nesorina.
Ny tombony dimy an'ny udango mena
Tanisao miaraka amin'ny tombony lehibe dimy ho an'ny fahasalamana amin'ny fihinana makamba mena.
Fitsangatsanganana an-tongotra sy sakafo
Nanapa-kevitra ianao fa handeha hanao vakansy, fa fialan-tsasatra inona no resahina eto? Angamba te-hitsangantsangana ianao.
Ny tombony fito amin'ny sushi
Tanisao ireo tombontsoa lehibe ara-pahasalamana fito amin'ny fahazarana mihinana sakafo japoney malaza indrindra: sushi.
Ny aviavy dia manampy anao hihena haingana kokoa
Ny aviavy, noho ny hery mahafa-po azy ireo, dia manampy anao hampihena ny lanjanao haingana kokoa mandritra ny sakafo fatiantoka lanja.
Smoothie matsiro manan-karena vy sy vitamina C
Ireo akora sy fomba fanomanana voankazo matsiro sy legioma mahasalama, be vy sy vitamina C.
Voaloboka, vinaingitra paoma ary zava-pisotro matavy miorina amin'ny tantely
Ianaro ny fomba fanomanana ranom-boankazo matsiro miorina amin'ny grapefruit, vinaingitra paoma ary tantely, zava-pisotro manampy handoro tavy ary hanamorana ny fandevonan-kanina.
Aviavy maina, sakafo tena tsara ho an'ny rafi-pandevonan-kanina
Ny aviavy maina dia, noho ny atin'ny fibra avoakany, iray amin'ireo sakafo tsara indrindra ho an'ny rafi-pandevonan-kanina.
Mango, voaloboka, poara ary savony mahamay mandoro
Ireo akora sy ny fomba fanomanana fihomehezana mandoro tavy miorina amin'ny voankazo, izay tonika tena tsara koa hanombohana ny andro matanjaka.
Rano oatmeal handoroana tavy sy hampihena ny kibo
Ny rano Oatmeal dia fanafody an-trano manampy amin'ny fandoroana tavy sy hampihenan'ny kibo, tena mora omanina.